I-honeymoon yazo zonke izinkathi zonyaka | Izindaba Zokuhamba
Isikhathi sangemva komshado sonyaka ngamunye
Maria | | Ezothando, travel
I-honeymoon yilolo hambo oluyingqayizivele nolungaphindaphindeki imibhangqwana esanda kushada abazoyenza ngemuva komshado baye endaweni exotic kakhulu lapho bangajabulela khona ipharadesi langempela eMhlabeni izinsuku ezimbalwa. Imvamisa umakoti nomkhwenyana bakhetha ukwenza loluhambo ngesimo sezulu esihle ngemuva komshado, okuyinto evame ukwenzeka phakathi kukaMeyi no-Okthoba.
Indawo okuyiwa kuyo ekhethelwe i-honeymoon ayinakulungiswa kuphela ukuthanda izinto zombhangqwana. Ukuze ugweme ukumangala kwesimo sezulu (izikhukhula noma isikhathi semvula namakhaza asebusika eningizimu yezwe), umakoti nomkhwenyana kumele bakhethe indawo okuyiwa kuyo bacabangele usuku lomshado, ngoba i-adventure ivame ukuqala ngemuva kwezinsuku ezimbalwa.
Uma ucwiliswe kumalungiselelo omshado wakho futhi ufuna imininingwane yokuhlela i-honeymoon yakho, sincoma ukuthi ufunde okulandelayo njengoba sizokhuluma ngezindawo ezinhle zesikhathi ngasinye sonyaka.
1 Ehlobo: i-Indonesia, i-Oceania ne-Afrika
2 Ekwindla: IVietnam neNdiya
3 Ubusika: ILatin America, iMaldives neKenya
4 Intwasahlobo: Japan
Ehlobo: i-Indonesia, i-Oceania ne-Afrika
Imibhangqwana eminingi ihamba nge-altare ezinyangeni ezishisayo zonyaka, ngakho-ke amazwe athanda IBotswana, i-Indonesia, iMozambiki, iAustralia, iTanzania, iFixed, iSamoa kanye nePolynesia yizindawo ezisezingeni eliphezulu kusuka ngoJuni kuya kuOkthoba ngenxa yamazinga okushisa amancane kanye nokungabikho kwemvula.
Isibonelo, iziqhingi zaseSouth Seas nase-Indonesia zisebusika bazo ngakho-ke akushisi ngokweqile futhi ayikho imvula. Futhi, yisikhathi esihle sokuhamba nge-safari e-Afrika. Kulezi zinyanga alina emazweni afana neMozambique, iBotswana noma iTanzania kanti ukungabi khona kwemvula kwenza izilwane zasendle zigxile ezindaweni ezinamanzi unomphela futhi kube lula ukuzicabanga. Ekugcineni, iziQhingi zaseFiji zisesikhathini esomile ngakho isimo sezulu siphakathi nendawo futhi mancane amathuba okuba neziphepho ezishisayo nemvula. Ngaphezu kwalokho, ipharadesi elinamanzi acwebezelayo nesihlabathi esimhlophe.
Ekwindla: IVietnam neNdiya
Njengoba i-India liyizwe elikhulu, asikho isikhathi esikahle sokuvakashela yonke insimu yayo, kepha singasho ukuthi ekwindla sekwedlule isikhathi imvula isiphelile futhi amazinga okushisa amnandi kakhulu. Ingenye yezindawo ezicelwe kakhulu ukuvakashelwa ngesikhathi se-honeymoon ngomlingo wezigodlo zayo, umehluko phakathi kwamasiko, i-gastronomy yayo ecebile nobuhle bezindawo zayo.
Ngokwengxenye yayo, isikhathi esihle sokwazi iVietnam sisukela ekuqaleni kwekwindla kuze kube ngu-Ephreli. Izwe elihle elibabazekayo ngamafa alo emvelo abanzi, i-gastronomy yayo esezingeni lokuqala namasiko ayo agxilile.
Ubusika: ILatin America, iMaldives neKenya
Isikhathi esihle kakhulu sokujabulela iziQhingi zaseMaldives ubusika, ikakhulukazi kusuka ngoDisemba kuya kuMeyi. Ama-degree ayo ajwayelekile angama-28 namabhishi alo amaphupho enza leli lizwe libe yindawo ekahle yokuphumula nokujabulela ilanga ngemuva komshado.
Kwemibhangqwana emisha, izindawo ezintathu ezithakazelisa kakhulu kungaba yiKenya, iChile neCosta Rica. Leli lizwe lase-Afrika liyindawo enhle yalabo abakhethe ubusika ukushada kanye nozibuthe weqiniso kulabo abafuna inhlanganisela yokuzijabulisa nokuzidela ku-honeymoon yabo. Eminye yemisebenzi engenakulibaleka engenziwa lapha ukuhlala kwelinye lamakamelo aseSwahili esiQhingini saseLamu, ukuhlola izigodi namahlathi asendle, ukulala ngaphansi kwezinkanyezi ekamelweni elisesihlahleni noma ukuya ku-safari ukubona imvelo izindawo ezingcwele zezwe.
Ngokwengxenye yayo, iChile izwe elibabazekayo lapho abasanda kushada bezothola khona isimo esiqhathaniswe kakhulu phakathi kwezintaba ezinhle ze-Andes, izinguzunga zeqhwa eziseningizimu nehlane elisenyakatho. Ezinye zezindawo ezinhle kakhulu ongazivakashela phakathi neholidi langemuva komshado eChile ugwadule i-Atacama, i-Easter Island, iViña del Mar, iPuerto Varas noma inhlokodolobha iSantiago de Chile.
UJanuwari kuya kuJuni futhi yisikhathi esihle sokuthola iCosta Rica, izwe eliphephe kakhulu eMelika Ephakathi. Isikhathi sayo sokomisa okungcono kakhulu ukuhambela yonke indawo yaso futhi siyengwe ngamabhishi aso kanye namahlathi aso angajwayelekile.
Ingcebo yemvelo yaseCosta Rica ingenye yezinto eziheha kakhulu abathandi bezemvelo. Igcwele amanzi afudumele futhi ahlanzekile oLwandle lweCaribbean empumalanga nePacific Ocean entshonalanga, izwe ligcwele izindawo ezinhle zokujabulela imvelo ngendlela yayo emsulwa.
Kusukela ngoMashi kuya kuMeyi futhi ikakhulukazi u-Ephreli isikhathi esihle kakhulu sokwazi iJapan njengoba izihlahla ze-cherry ziqala ukuqhakaza futhi izwe liba yinsimu enhle. Ithuba eliyingqayizivele lokuthola izingadi ezinhle zase-Asia noma uphumule emithonjeni yalo eshisayo.
Njengoba iJapan kungelilo izwe elikhulu kakhulu, kulula ukuhlanganisa usuku lokuyothenga nokuvakashela emadolobheni ukuze uzicwilise ekuxakekeni nasekuzijabuliseni kwamadolobha amakhulu aseJapan ngosuku lokuvakasha nokuvakashela emapaki alo emvelo nasezindaweni zasemakhaya .
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Izindlela zokuphunyuka » Ezothando » Isikhathi sangemva komshado sonyaka ngamunye